अनौठी महिला : जस्ले सुन्दिनन् पुरुषको आवाज
असार ३०- दुनियामा मानिसहरुलाई बिभिन्न आश्चर्य खालका रोगहरु लाग्ने गरेका हुन्छन् । जस्को अचम्म खालको समस्याहरु हुने गर्छन् । बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय समाचारका अनुसार दुनियामा यस्ती महिला छिन्। जो पुरुषको आवाज सुन्न सक्दैनन् । बताईए अनुसार पहिले चेन नामकी ती महिलाको यस्तो समस्या थिएन् । तर पछिल्लो समय उनि त्यस अनौठो रोगसँग संघर्ष गरिरहेकी छिन्।
यस मसस्या आउदा शुरुमा उनको कानमा राती घण्टी बजेझैँ भयो । त्यसपछि ती महिलालाई बान्ता आउन थाल्यो । र उनको कानले सुन्न छाड्यो । उनलाई reverse-slope hearing loss भन्ने रोग लागेको डाक्टरहरु बताउछन् ।
यस रोगका कारण उनले न्यून आवृत्तिको आवाज सुन्न सक्दैन । पुरुषको आवाज न्यून फ्रिक्वेन्सीको हुने हुनाले यस रोगका लागेपछि पुरुषको आवाज नसुन्ने समस्या आउने गर्छ । तर महिलाको आवाज भने पुरुषको भन्दा उच्च फ्रिक्वेन्सीको हुने भएकोले ति महिलाले समेत सुन्ने गर्छिन् । आफ्नो ब्वायफ्रेण्डको आवाज सुन्न छाडेको भन्दै ती युवती अस्पतालमा पुगेकी थिइन् ।
बुटवलको सिद्धबाबा मन्दिरमा निःशुल्क बस सेवा
यसरी छानिएको रहेछ ट्राफिक लाईटको रङ, यस्तो रहेछ इतिहास
सर्वाधिक धेरैपटक रक्तदान गरेर गिनिज बुकमा नाम दर्ता
जब एक युवकले दुई तलामाथिबाट खसेकी बच्चीलाई समातेर बचाए (भिडियो सहित)
इनरुवामा भयो भैंसी सुन्दरी प्रतियोगिता, प्रथम हुने भैंसीका मालिकलाई भैंसी नै पुरस्कार
जिब्रोले निधार छुने उर्लाबारीका यज्ञ ! जो बन्दै छन् भाइरल
यो हो दुनियाकै महंगो टेबुल, मूल्य १ अर्ब २६ करोड
विश्वकै महंगो झाेला : २ कराेड ३३ लाख रूपैयाँमा बिक्याे ‘बर्किन ब्याग’ !
विचित्रको बच्चाको जन्म, जसको महिला र पुरुष दुवै जनेन्द्रीय अंग छ
१९ वर्षकी यी किशोरीलाई किन सुटकेसमा लुकाइयो ?